Media sy Fanoratan-gazety · Marsa, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Marsa, 2019
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Marsa, 2019
Maso Arabo: Eritreritra Ramadan
Satria mifarana vetivety ny volana masina Ramadany, mizara ny eritreriny momba ny volana, ny zavatra ataon'izy ireo, ny fenitry ny fitondrana fiara ary ny fanirian'izy ireo hiala-sasatra.
Amerika Latina 27 Marsa 2019
"Nanery anay io 'maherifo' io hipetraka an-trano, hiahiahy ny hafa rehetra, ary hamaly amin'ny tifitra sy ny herisetra."
Olona 30 tapitrisa ao Brezila no miaina any amin'ny “dezaka fampitam-baovao”
Amerika Latina 20 Marsa 2019
Ao anatin'ny olana ny tsy fitoviana, izay misy fiantraikany amin'ny fifandraisana ihany koa.
Voampanga ho ‘niketrika ditra’, navotsotra ilay mpanao gazety Luis Carlos Diaz ao Venezoela
Amerika Latina 15 Marsa 2019
Faly ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices fa salama sy eo anivon'ny fianakaviany ny mpiara-miasa aminay. Hanohy hanara-maso ny raharahany isika amin'ny fivoaran'izany.
Afrika Mainty 12 Marsa 2019
Norvezy: Ny Soritra Anaty Aterineto Momba ny Mpamono Faobe Iray
Eoropa Andrefana 10 Marsa 2019
Mbola nanohy hatrany nikaroka ireo soritra rehetra tety anatin'ny tambajotran-tserasera mikasika an'i Anders Behring Breivik, ilay lehilahy ahiana ho mpamono, ireo blaogera sy mpanao gazety tany Norvezy sy tany ivelany, izay manantena fa hanampy amin'ny fanazavana ny hetsiny tamin'ny Zoma 22 Jolay 2011 izany.